Vita sonia teto Toamasina ny zoma 15 jona teo ny sonia fanomezam-bola fito miliara Ariary ny ivon-toerana CTCP (Centre de Transformation et de Conservation des Produits) ao Analamalotra Toamasina Surburbain. Avy amin’ny Tahiry Eoropeana ho an’ny Fampandrosoana andiany faha-9 sy faha-10 ny famatsiam-bola.
Maro ny vokatra vokarin’ny CTCP Analamalotra toy ny poavra mena (baie rose) izay mahavita 15 taonina isam-bolana amin’ny fotoana fahavokarany, eo koa ny sakay sy ireo antsoina hoe : “pate de fruits” izay amidy hatrany ivelany.
Fenoarivo Atsinanana: Tafakatra 6 000 Ariary ny litatry ny.lasantsy varomaizina
Miantraika amin'ny vidin-javatra ilain'ny mponina andavan'andro ny fahasimban'ny tetezana ao Antaratasy RN5, nihotsaka tsy nahazaka ny vesatry ny kamiao nandalo teo aminy.
Fiara latsaky ny 2 taonina no hany zakan'ny tetezana. Vokany dia tafakatra 6 000 Ariary ny vidin'ny lasantsy amin'ny varomaizina, 5 000 Ariary ny gazoala.